Heshiis horudhac ah oo laga gaaray Colaadii Soomaalida iyo Canfarta - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Heshiis horudhac ah oo laga gaaray Colaadii Soomaalida iyo Canfarta
Heshiis horudhac ah oo laga gaaray Colaadii Soomaalida iyo Canfarta
Heshiis horudhac ah ayaa laga gaaray dagaalkii u dhaxeeyay dowlad degaanka Soomaalida iyo maamulka Canfarta ee dalka Itoobiya.
Waxaan galabta dhacay shir saddex-geesood ah oo dhexmaray Dawlada Federalka Itoobiya, labada maamul ee Deegaamada Soomaalida iyo Canfarta oo ka dhacay Wasaarada Nabada ee dalka. Waxaa shirka furtay, hagtayna Wasiirka Nabada Marwo Mufariat Kamil. Waxaase gunaanaday Raisalwasaaraha Dalka Dr. Abiy Ahmed.
Dood dheer kadib waxaa la isla meel dhigay qodobada hoos ku qoran:
In la joojiyo colaada, ciidamada labada dhinacna ay ka duurkaan jidka laamiga ah ee isku-xidha Awash iyo Jabuuti ugu yaraan 10km (dhanka bari Soomaalida, dhanka galbeedna Canfarta).
In qadiyada sadexda magaalo ee Grabaciise, Candhuuf Macaan (Candhuftu) iyo Cadeey (Cadeeytu) lagu xalin doono nidaam sharci ah inta ka horaysana ay ciidamada qaranku sugayaan amniga shacabka magaalooyinkaas; islamarkaana la baadho weerarkii iyo waxyeeladii shalay ka dhacday Cadeey (Cadaytu) iyo guud ahaan isku dhacyadii u dambeeyay;
In aan deegaamayn cusub la samayn karin aaga colaadu ka jirto oo ah aaga ka caagan ciidanka;
In hay’adaha amniga ee qaranka ay bari laga bilaabo tagaan goobta isla markaana ay xaqiijiyaan fulinta qodobadaas lagu heshiiyay.
Previous articleBulshada Rayidka oo walaac ka muujiyay xaalada adag ee dalku galay
Next articleBeesha Caalamka oo dalbatay in dib loogu laabto Shirkii xukuumada sheegtay in uu fashilmay